China Ukuhombisa mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
I-acrylic ifumene ukuthandwa ngaphezulu kweglasi yokwenza ifreyimu kwiminyaka yakutshanje ngesizathu esivakalayo.
● Iyaphuka kwaye ilula, ngokwahlukileyo kwiglasi. Olu phawu lwenza i-acrylic ikhetheke kubafoti abasebenza nabantwana kunye neentsapho - ngakumbi iintsana. Ukuxhoma isakhelo ngepaneli ye-acrylic kwindawo yokugcina izinto okanye kwigumbi lokudlala kukhuseleke ngakumbi kunenye indlela yeglasi, kuba akunakulimaza mntu ukuba inokuwa.
● Ukongeza, i-shatterproof kunye nobunzima bendalo yenza i-acrylic ikulungele ukuthunyelwa. Sicebisa isakhelo se-acrylic kwimiboniso yobugcisa obucocekileyo kuba yi-1/2 ubunzima beglasi kwaye ayinakuqhekeka. Ukwenza kube lula kwaye kukhuseleke ukuhambisa nokuthumela umsebenzi wobugcisa kwimiboniso.
● yomelele. Ayizukubangela ukuba isakhelo siguqe ngokuhamba kwexesha. Ke yinto ekhethiweyo xa ujinga ubugcisa obukhulu kunye nokugcinwa.
Cacisa i-acrylic lolona khetho luqhelekileyo kusetyenziso lwemihla ngemihla. Ixabiso elincinci kusapho lwe-acrylic, kwaye iya kukunika ukuya kuthi ga kwi-92% yokuhambisa ukukhanya komfanekiso ocacileyo.